Sentinel Lobby | ThatsLuck.com
Sentinel Lobby waa addon u fiican fantasticLobb Miner, software ugu horeysay roulette online kuu ogolaanaya inaad si ay ula socdaan waqtiga dhabta ah Ergo 20 miis roulette.
Si aad uga faa'iideysato barnaamijkan haddaba waxaa lagama maarmaan ah in aad horey u iibsatay the buuggaLobb Miner, si kastaba ha noqotee, haddii aad horeyba u haysatay faylal qoraal ah oo ay ku jiraan waxyaabo lagu keydiyo miisaska roulette, waxaad si ammaan ah u isticmaali kartaa barnaamijka sida aad doorbideyso, sidoo kale Sentinel Lobby waxaa jira hawlo xiiso leh oo aan si gaar ah u khusayn xogta ay soo ururisay Lobby Miner.
Sidee Lobby Sentinel u shaqeeyaa
Sentinel Lobby ficil ahaan waxay isku dhejisaa faylasha qoraalka lagu duubay waqtiga dhabta ah ►Lobb Miner oo wuxuu faahfaahinayaa tirooyin taxane ah oo la xiriira fursadaha fudud ee roulette, markaa aan ka hadalno fursadaha caadiga ah:
Ed Casaan / Madow
Igh Sare / Hoos
Xitaa / Odd
Waxa ugu horeeya ee la sameeyo marka barnaamijka la bilaabo waa in la xusho miisaska aan dooneyno inaan kormeerno (sidaa darteed waxaa loo maleynayaa ►Lobb Miner horay ayuu u socday muddo wuxuuna duubayaa nambarada lagu sii daayay miisaska kala duwan).
Qeybta labaad Shaxda Roulette Hoooker, waa inaad markaa gujisaa badhanka taga dhanka bidix oo aad doorataa mid ama in kabadan oo kamid ah feylasha qoraalka ee ay duubeyso ►Lobb Miner kuna yaal galka soo saarka by Lobby Miner, haddii shaki ku jiro fiidiyowga atYouTube, wax walba hubaal way sii caddaan doonaan.
Sida aad ku arkeyso sawirka, waxaan xushay kaliya qaar ka mid ah miisaska la heli karo, gaar ahaan iska ilaalinta miisaska sida Lightning Roulette, Quantum Roulette, iyo sidoo kale dhammaan roulettes otomaatig ah, maadaama wax soo saarka miisaskan marwalba aan gebi ahaanba la kala soocin.
Marka xulashadan fudud la dhammeeyo, ka dib waxaan u gudbi karnaa qeybta saddexaad Qolka Xakamaynta, taas oo si sax ah u ah xarunteena howlaha.
Halkan waxaan ku haynaa wax walba oo aan u baahan nahay si aan u fahamno waxa dhacaya, ku dhowaad waqtiga dhabta ah, miisaska kala duwan ee lagu xushay guddigii hore.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad gujisaa badhanka Reload Miisaska Roulette, sidan ayaa lagu rari doonaa Sentinel Lobby dhammaan faylasha miisaska kala duwan ee la xushay runtiina waxaad arki doontaa in lambarada wareegyada diiwaangashan ay sidoo kale soo muuqan doonaan (Safka wareega), halka sadarka koowaad (Khamaarka #) waxay u adeegi doontaa oo keliya in lagu muujiyo jadwalka iyadoo la adeegsanayo horusocod xarfaha ah A,B,C, iwm
Marka hawlgalkan fudud la dhammeeyo, waxaan markaa gorfeyn karnaa miisaska kala duwan ee ku xiran laba siyaabood oo kala duwan: midkoodna si isku xigxiga, ama midba mar gacanta.
Waqtigan xaadirka ah waa lagama maarmaan in la sameeyo hakad lama huraan ah si loo sharaxo nooca tirakoobka lagu falanqeynayo Sentinel Lobby.
Haddii aysan ahayn markii kuugu horreysay ee aad soo booqato ThatsLuck.com waxaa laga yaabaa inaad horey u aqrisay wax ku saabsan dhimaya tirakoobka t-Arday boostada loogu talagalay tracker ee Roulette ►t-nasiib algorithms.
Haddii aad runtii rabto inaad ka akhrisato mowduuca waxaan kugula talinayaa inaad aqriso (ama dib u aqriso) qoraalkaas, xilligan la joogo, marka la soo gaabiyo, waxaan dhihi karnaa t-Student waxba kama badna a qiimaha tilmaamaya ballaca farqiga laba fursadood oo iska soo horjeedda.
Baaxaddiisu aad ayey u xaddidan tahay, aan dhahno waxay ka socotaa 0 (isu-dheellitirnaan qumman oo sidoo kale loo tixgeliyey eber) illaa 4 (qiimaha ugu badan ee tirakoob aan la qiyaasi karin)
T-Ardaygu sidoo kale wuu shaqaalayn karaa qiyamka xun, marka loo eego in marka qiimuhu togan yahay ay ka dhigan tahay inuu jiro ku badnaan fursad, haddii qiimadu xun tahay macnaheedu waa inay jirto hoos u dhac (sidaa darteed ficil ahaan waxaa jiri doona xad-dhaaf ah fursadda ka soo horjeedda).
Waxaan haddaba leenahay guud ahaan inta u dhexeysa -4 e 4, halkaas oo qiimaha 0 uu matalayo isu dheelitirka saxda ah.
Kaliya si loo cadeeyo, 37 wareejin qiimaha eber ayaa la helayaa haddii Casaanku soo baxo 18 jeer, Madow 18 jeer iyo hal jeer 0.
Markaan aasaasnay ​​cabir tixraac ah, waxaan tusaale ahaan u soo saari karnaa in haddii qiimaha t-Ardaygu ka yar yahay 2,5 aan ku jirno xaalad farqi caadi ah, wixii ka dambeeya 2,5 farqi cad oo muuqda ayaa bilaabmaya, halka wixii ka dambeeya qiimaha 3 (tixgelinta taas laga helayo tirakoobka ugu badnaan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay 4), fursadda hyperfrequency waa inay bilowdaa inay ka baxdo qol badan oo fursadda dhiman (ku noqoshada isu-dheellitirka).
Waxaan halkaan ku joojinayaa, waqtigaan la joogo waxaa muhiim ah in la sharaxo sida loo aqriyo tirooyinka aan ka hadli doono wax yar ka dib, markaa qof walba wuxuu xor u noqon doonaa inuu dejiyo istiraatiijiyad u gaar ah oo ku saabsan dhimista farqiga (ku soo noqoshada sinnaanta) halkii laga sii wadi lahaa farqiga (raac isbedelka fursadda hyperfrequency).
Sida loo helo xogta
Aynu dib ugu noqonno sawirkii hore, sida aad ku arki karto xulista Heerka Digniinta Ardayda Waxaan dhigay qiimaha 2,5 taas oo ku saleysan waxa kor lagu soo qoray waxay u taagan tahay qiime tilmaamaya jiritaanka farqi muuqda.
Xullaha isla markiiba midigta Sawirkii ugu dambeeyay ee # taa bedelkeeda waxaan aadeynaa inaan muujino a Sentinel Lobby in la falanqeeyo oo keliya 300 ee ugu dambeeya ee wareega.
Waxaad horayba u aragtay adoo fiirinaya tiirarka 'Spins column', in sawirka miisaska kaladuwan ee wax kayar 100 wareeg la duubay, taas macnaheedu waa kiiskan Sentinel Lobby si kastaba ha noqotee waxay falanqeyn doontaa dhammaan nambarada diiwaangashan, haddii tusaale ahaan aan ka helnay kun kabadan miiskiiba, kaliya 300 lambar ee ugu dambeeyay ayaa la falanqeyn lahaa.
Waqtigan xaadirka ah, ka dib markaad go'aansato qiimaha Digniinta (2,5) iyo illaa iyo inta wareegyada miiska si loo falanqeeyo (ugu dambeeya) 300), waxaan go'aan ka gaari karnaa haddii taxliil dhammaan miisaska isku xigxiga adigoo riixaya badhanka Sawirada Dhamaan Miisaska - xaaladdan waa inaan sugnaa software-ka si uu u dhammeeyo falanqaynta miisaska oo dhan - ama waxaan u gorfeyn karnaa miisaska si shaqsi ah, adigoo gujinaya badhanka leh wareega cas ee safka Hubi.
Sida loo fasirto xogta
Marka lambarada lagu sii daayo miisaska oo dhan la falanqeeyo, gudigeena koontaroolka ayaa laydh ku shidi doona laydhadhka cagaaran, taas oo muujinaysa jadwalka iyo fursada uu faraqa u keenayo qiime togan ama diidmo ah 2,5
Maskaxda ku hay in raadinta qiimaha 2,5 (ama wax alla wixii aad doorato) ay gadaal uga bilaaban doonaan wareegga ugu dambeeya ee miiska lagu duubay, haddii qiimaha 2,5 la helo kahor wareegga 300, baaritaanka ayaa istaagaya Safka Tranche hel dhab ahaan intee le'eg yihiin wareegyada ugu dambeeya ee soo saaray farqiga la raadinayo. Waad gali kartaa qiyamka xitaa ka weyn 300, sida iska cad waqtiyada falanqaynta way sii dheeraan doonaan.
tusaale: sawirka kore ee Jadwalka B qiimaha 2,5 waxaa loo soo saaray fursadda Cas, qiimaha 2,5 waa mid togan, marka hubaal waa Casaan soo baxay marar badan, si kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, haddii aan eegno Safka Tranche, Waxaan garwaaqsannahay in qiimahan lagu soo saaray kaliya 6 wareeg, sidaas darteed waxay ka dhigan tahay in lambarrada 6 Cas ay soo bixi doonaan si isku xigxigta, wax gaar ah markaa.
Xaalad la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacda Miisaska F e J, sidaa darteed waa inaan sugnaa waqtiyada wanaagsan oo aan ku celcelinno falanqaynta.
Qabsasho otomaatig ah!
Sidaad ogtahay ►Lobb Miner waxaa loo qorsheeyay in lagu soo qabto lambarrada si aan xad lahayn, markaa maxaa diidaya in Lobby Sentinel uu u shaqeeyo si isku mid ah?
Hadaad gujiso badhanka Gawaarida Gawaarida oo gogol dhig (ugu horreyn) wakhti go'an, dhowrkii daqiiqaba mar Sentinel Lobby dib ayey u buuxin doontaa xogta ay qortay Lobby Miner waxayna ku celin doontaa falanqaynta miisaska oo dhan tanna ilaa ugu dambeyn a dhawaaqa digniinta kaas oo la hawlgeliyey adigoo gujinaya ikhtiyaarka Digniinta Dhawaaqa.
Sidoo kale, haddii halkii aad ka heli lahayd qaylo-dhaan la maqli karo aad rabto emayl si aad uga digtoonaato taleefankaaga casriga ah, kaliya awood u yeelo xulashada Digniinta Emailka.
Labada ikhtiyaar ee ugu dambeeya boggan barnaamijyadu waa Joogso taas oo ka tagaysa daaqada barnaamijka had iyo jeer hore iyo Badhanka codka, taas oo aamusinaysa qaylo-dhaanta la maqli karo ee hore loo hawlgeliyey.
Laakiin goormaad ciyaareysaa?
Halkan waa xaalad aad uga duwan sidii hore, halkan waxaan ku leenahay Shaxda G oo leh qiimeyn arday 2,62 laakiin kaliya ka dib 10 Lataliyihii, halka ay Jadwalka F waa at 2,53 fursad Sare ee dhammaadka 179 wareejin.
Waqtigan xaadirka ah waxaan joojinayaa, macnaha waa inaad qiimeysaa istiraatiijiyadda (waad ku mahadsan tahay sidoo kale qalabka aan gadaal ka heli doonno), laakiin tusaale ahaan tusaale ahaan inaad rabto inaad u ciyaarto si aad ugu soo noqoto dheelitirka fursadda sare ee tan miiska, guji badhanka leh dhibicda cagaaran ee column Dagaal! oo aan aragno waxa dhaca.
Waxay dhacdaa inaad si toos ah ugu beddelato barta ' Guddi Autopilot ah, halka qaybta sare aan ka helno a abuurka bot si otomaatig ah loogu sharaddeeyo inta isboorti ee aan dooneyno oo aan gadaal ka hadli doonno, halka qeybta hoose ay jiraan dhammaan tilmaamaha ku saabsan sharadkeenna.
Waxa ugu horreeya ee aan aragno waa magaca Shaxda F (Talyaani Ruush kiiskan), ka dib waxaan fureynaa biraawsarkayaga oo aan u galnaa miiska sidii caadiga ahayd.
Isla marka wixii aan u baahan nahay inaan sameyno ka dib gacanta geli tirooyinka 5 ama 6 ee horeyba u soo baxay isla markaasna aan ka arki karno taariikhda miiska laftiisa.
Qoraalka magaca miiska hoostiisa haddii aad dareento inuu jiro joogitaan leh dhammaan wax soo saarka oo isdaba socda, sidaa darteed way fududaan doontaa in la fahmo lambarka aad u baahan tahay inaad ku bilowdo galinta.
per ku darid lambar cusub riix rooga sawirka, waayo baabi'iyo wixii galitaan qaldan ah, kaliya laba-guji nambarka qaldan ee safka joogitaanka.
Sida aad ku arkeyso sawirka, ka dib markii aan galnay 6 lambar ee isla waqtigaas soo baxay, waxaan sidoo kale haynaa xog kale oo muhiim ah: hoos t-ardayga qiimihiisa fursad kasta waxaa xaqiiqo ah sidoo kale tirada halbeegyada fursadda hypofrequency waa inuu u ogolaadaa ciyaaryahanka inuu guuleysto (Faa'iido) haddii farqiga u soo noqdo isu-dheellitirka, sida t-Student = 0.
Xaqiiqdii, fursadda sare waxaa jira rajo laga qabo 18 cutub oo lagu guuleysto iyadoo lagu sharraxayo fursadda hoose (ama 1-18 haddii aad doorbideyso, ama Manque saaxiibbada Faransiiska).
Markaa haddii aan doonayo inaan u ciyaaro soo noqoshada dabiiciga ah ee qashinka (markaa waa inaan ku khamaaraa Fursadda Yar), waxaan dejin karaa hadaf (Stopwin) oo ah 9 ama 10 cutub (kalabar soo kabashada la filayo)
Waxaan cadeynayaa in soo kabashada la filayo (Faa'iido) maahan lambar la allifay, laakiin waa sida saxda ah wax soo saarka ay tahay in fursadda Yar ay ku dhacdo 185 wareeg.
Dhibaatadu, si kastaba ha noqotee, waa in aynaan ogeyn inta wareegyo ee soo kabashada ay dhici karto, macnaha ah in hubaal fursadda Yar ay dib uga soo kabanayso khasaaraha, laakiin haddii aysan ku sameyn gudaha 500/600 biin, eberku wuxuu cuno dhammaan faa'iidooyinka suurtagalka ah (waa la fahmay sababta aad u lumiso roulette?).
Si aan uga ilaaliyo ciyaaryahanka masiibadan mala-awaalka ah, waxaan siiyay ikhtiyaarka ugu dambeeya ee gudigan (ama ugu yaraan qaybta hoose ee la xidhiidha sharadka), taas oo ah Bet% xulista.
Tani waxay kaliya noo ogolaaneysaa inaan dooranno boqolkiiba hits ku dhowaad loo fiirsaday (179 sawirka) si looga qaado ceebta xulashada goorta la joojinayo.
Aynu nidhaahno in qiimaha ugu wanaagsan ee ujeeddadani tahay in la ciyaaro 15% ee rikoodhada la duubay.
Marka haddii aan doorto 15 liiska xulashada Bet%, waxay dhacdaa ...
Way dhacdaa taas ku yaal bot waxaan heleynaa tirada tallaalada la ciyaarayo, taas oo ah 27 (ama 15% 179), marka waqtigan la joogo waxaa ku filan in gacanta lagu dhigto sharadka ugu horreeya ee Fursadda Yar kadibna riix Badhanka OFF, kaas oo dhaqaajin doona bot-ka 27 qaybood.
Kadib dhacdooyinka 27, waxaan u dejin karnaa bot-ka inuu damiyo PC-ga (xiritaanka) ama in la dhawaaqo alaarmiga (Cayaarta Sound).
Haddii, dhinaca kale, sababo kale oo aad rabto inaad uga tagto bot-ka si aad ugu sharraxdo 10, 100 ama 1.000 wareejin, kaliya gacanta ku soo gal qiimaha la doonayo berrinka ku xiga badhanka OFF oo wax walba bilow.
Isku habee Autopilot-ka
Waxay qaadataa wax aad u yar, ficil ahaan waa inaad gashaa iskudhafka X / Y ee shaashadda qaybaha kala duwan 2 dhibcood kaliya: tan hore waa iska cadahay badhanka inuu ku celiyo sharadka, tan labaadna waa barta shaashadda aan ku dooranno sida Trigger Point.
Il Trigger Point asal ahaan waa dhibic shaashadda in midab beddel kaliya marka sharad la furo.
Bartaan (isla kan ay ku tiirsan tahay Lobby Miner), tirinta ilbiriqsiyo ayaa ka soo muuqaneysa wareega kasta oo sharad, halkaasoo lambarradu ay waaweyn yihiin oo midabkoodu caddaan yahay.
Sida lagu muujiyey fallaarta gaduudan, markasta waxaan doortaa barta dhexe ee lambarka 1.
Si aad u gasho iskuduwaha iyo lambarka midabka ee 'Trigger Point', waa inaan si fudud u doortaa ikhtiyaarka Turbo Config (dhinaca kore ee midig), i dul dhig lambarka 1 markay soo muuqato (barta ay ku taal halka loo yaqaan 'Code Code' ee ku yaal Baarka Pixel Info è ClWhite sida ku cad sawirka) e riix booska mar kumbuyuutarka
Taasi waa intaas, iskuduwaha bartaani si otomaatig ah ayaa loogu duubi doonaa barnaamijka! Badhanka soo noqnoqoshada / xaqiijinta ee khamaarista oo keliya, waa inaan naftayda dhigaa in ka badan ama ka yar bartamaha meeshan oo aan ka akhriyo iskudhafka shaashadda ka dibna gacanta ku geli labada sanduuq X Coord e Y Coord bidix kore
Aynu dib u soo koobno: Waxaan hubiyaa ikhtiyaarka Turbo Config, waxaan jiirka dul dhigaa lambarka 1 ee tirinta, hubi in koodhka midabku uu cad yahay (clwhite) iyo meel bannaan oo saxaafadda ah. Kadibna waxaan ku dhejiyayaa jiirka badhanka aan riixi lahaa si aan u xaqiijiyo sharadka (xusuusnow in sharadka ugu horeeya lagu sameeyo gacanta fursad, markaa kuwa soo socda waxay ku filan tahay inaad riixdo kaliya badhanka soo noqnoqoshada) iyo akhrinta iskuduwaha barta 'Pixel Info bar', waxaan iyaga gacanta ugu gelayaa sanduuqyada '2 coord X co and Y coord'. Taasi waa taas.
Ugu dambeynti, waan sharxi doonaa shaqada labada sanduuq Saacad Bet e Dib udhaca Bet: tan hore waa miiska la dhaqaajiyo isla marka la arko barta Trigger-ka ee fiidiyaha laga daawado (markaa waad ogaan doontaa xitaa haddii kicinta si sax ah loo qaabeeyo), tan labaadna waa tirada ilbiriqsiyo ee la sugayo ka hor intaan la higsan tan iyo markii ay dhibic dhibicdu muuqato .
Haddii aad 2 dhigto goobtaas waxay ka dhigan tahay in sharadka la sameyn doono 2 ilbidhiqsi ka dib markii dhibic kiciyaha uu ka soo muuqday shaashadda.
Wixii shaki ah dabcan ka daawo fiidiyaha ►YouTube.
Hadda aan u gudubno guddigii ugu dambeeyay laakiin uguyaraan ee Lobby Sentinel, oo ah kan t-Shaybaarka Ardayda.
Thanks to jilitaankan waxaad awoodi doontaa inaad sameyso tiro tijaabo ah oo aan xad lahayn si aad u fahamto sida farqiga fursadu u dhaqmayo waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad hesho xuduudaha ugu fiican si aad u dejiso istaraatiijiyadaada ciyaarta.
Xisaabiyaha ugu horreeya xagga sare (t-Xisaabiyaha Ardayga) waa xisaabiyaha t-ardayga fudud, kaliya gali tirada wareegyada la ciyaaray (dhab ah ama loo malaynayo), tirada wax soosaarka fursad fudud oo riix badhanka TS Calc, qiimaha u dhigma tS ayaa isla markiiba la soo bandhigi doonaa agtiisa.
Isla markiiba ka hooseysa tan waxaan ka helaynaa t-Ardayga ah, taas oo noo oggolaan doonta inaan falanqeyno qiyamka tirakoobka xiisaha leh.
Xaqiiqdii, jilitaanka waxaan ku dhejin karaa, marka lagu daro tirada wareega ee la falanqeynayo, laba qiime oo t-Ardayga ah (kuwa xushay A e B) oo aan rabo inaan baaro.
Ka dib riix furaha Samee Mid baan yeelayaa hal jilid la garaafyada qaraabo ah dhaqankan cusub ee ay t-Ardayga oo kaliya fursad ah (tusaale ahaan Red) iyo garaafka (mid hoose) la dhaqankan cusub ee miiska ah lacag caddaan ah dalwaddii loo gudbiyaa labo ciyaaryahan oo khiyaali ah, kuwaas oo had iyo jeer bet bayaan on Red ama had iyo jeer on Madow (eber-soo-saar eber ayaa si cad u daboolaya xisaabinta).
Riixitaanka furaha jilitaanka dhowr jeer ayaa markaa yeelan doona jilitaanno kala duwan oo isku xigxiga.
Laakiin ka warran haddii aad rabto inaad aragto natiijooyinka 50.000 jibbaarano oo midkiiba 50 wareegayo? Tan kaliya riix Badhanka Rng iyo dhowr ilbiriqsi kadib (ama daqiiqado haddii aad gashay tiro badan oo jilitaan ah ama aad ballaadhisay dhererka hal lug, tusaale ahaan 50 illaa 200 ama kabadan wareegyo), waxaad awoodi doontaa inaad u fiirsato xogtan xiisaha leh, oo kala ah:
► imisa jeer boqolkiiba boqolkiiba t-Ardaygu wuu dhaafay qiimaha A in aan ku sheegnay sanduuqa qaraabada;
► imisa jeer boqolkiiba boqolkiiba t-Ardaygu wuu dhaafay qiimaha B in aan ku sheegnay sanduuqa qaraabada;
► imisa jeer ayaa boqolkiiba qiimaha t-Ardayga dhaaftay qiimaha A sidoo kale waxay leedahay dhaaftay qiimaha B.
Dhammaan natiijooyinka boqolkiiba waxay si cad ula xiriiraan tirada imtixaannada lagu muujiyey berrinka midigta Badhanka Rng loona tixraaci karo hal jibbaar nambarro ah oo dhererkoodu le'eg yahay kan lagu muujiyey duurka Dhibco.
Laakiin maxay waxan oo dhan inoo qaban karaan? Xaqiiqdii waxay noqon kartaa taageero si loo xaqiijiyo dhacdooyinka tirakoob ahaan aan macquul aheyn in laga hor yimaado, ama kuwa ugu badan ee lagu ciyaaro si loogu doorto kuwan.
Tusaale ahaan dhacdo dhacdo ku saleysan dhacdooyin aan macquul ahayn: Waxaan weydiisanayaa jiliyaha inuu abuuro 50.000 kulan oo 100 wareeg ah midkiiba si aan u arko inta jeer, marka qiimaha tS-ka uu kor u kaco 3, ka dib hoos ayuu u dhacayaa (si loogu ciyaaro sidaas darteed dib u soo kabashada fursadda hypofrequency).
Haddaan galiyo astaamahan jilitaanka ka dib dhowr daqiiqo oo aan sugayay waxaan helayaa natiijadan:
Marka tS uu gaaro 3, kaliya 1tiiba 5 (19,29% waqtiga) ayaa sidoo kale gaaraya 3,50.
Tani waxay ii sheegaysaa haddii aan ku jiro guddiga Qolka Xakamaynta Waxaan ku soo rogay a Alert qiimaha 3 iyo inta lagu jiro diiwaangelinta tani waxay u dhacdaa Tranche tirooyinka ku dhow 100 wareeg, waxaan sidoo kale ka fekeri karaa isku dayga inaan ku guuleysto cutubyo qaar anigoo ciyaaraya si aan u xiro farqiga u dhexeeya fursadda qasaaraha.
Tusaale ahaan Weerar Dhacdo Ku Saabsan Dhacdo: Waxaan ka codsanayaa jilista inuu abuuro 50.000 100 kulan oo 2 wareeg ah midkiiba si aan u arko inta jeer, marka qiimaha tS uu gaaro XNUMX, ka dib wuu sii kordhayaa (sidaas darteed in loo ciyaaro sii socoshada isbedelka fursadda hyperfrequency).
Haddii aan galiyo astaamahan jilitaanka (had iyo jeer dhowr daqiiqo ka dib markaan sugayo) waxaan helayaa natiijadan:
Taasi 57,92% waxay si fudud ii sheegtaa in marka tS uu ku dhufto 2 ay u badan tahay inuu sii wado kor u kaca halkii uu ka dhici lahaa.
Waxaan halkaan ku joojinayaa, kuwan waa uun laba tusaale oo fudud oo ah sida loo dejiyo istiraatiijiyad suurtagal ah, xulashooyinka iyo xogta suurtagalka ah in la gudbo runtii waa tiro aad u tiro badan, waxa kaliya ee aan kugula talinayo waa inaad si dulqaad leh ugu sugto jilitaanka dhaadheer adigoon wax dheeri ah ka saarin barnaamijka. , xitaa haddii wax walba ay u muuqdaan in la xannibayo oo qoraallada qaarkood sida "barnaamijku kama jawaabayo" ay u muuqdaan, dhab ahaantii way shaqeyneysaa, kaliya sug waqtiga lagama maarmaanka ah, oo si cad ugu xiran awoodda xisaabinta ee kombiyuutarkaaga CPU.
Ugu dambeyntii shaashadda ugu dambeysa! Nasiib wanaagse, wax aad u yar baa halkan laga dhahayaa, waa arrin si fudud loo dejiyo 2 nooc oo digniin ah lagu siiyay guddiga Qolka Xakamaynta.
Midka uguhoreeya uguna fudud ayaa ah in la doorto codka aan dooneyno inaan maqalno marka alaarmiga qiimaha tS la dhaqaajiyo haddii aan howlgelinay. Gawaarida, ama markii wareegyada sharadka ee bot ay dhammaadeen.
Haddii aad uga tagto 'Mute' sida iska cad waxba lama maqli doono xitaa haddii aad kicisay qaylo-dhaanta dhawaaqa, haddaba sidaas ula jaan qaado.
Hoos kadhagayso waxaan helnaa xuduudaha qaabeynta haddii aan rabno inaan helno emayl markasta oo qaylodhaan ka timaada qiimaha ardaygu kaco (sida iska cad in la isticmaalo hadaan dhaqaajinoGawaarida).
Qiyaasta ahaan waa inaad gashaa kuwa sanduuqaaga boostada, taas oo markaa noqon doonta soo diraha iyo qofka helaya fariimaha digniinta ah, ama waxaad isticmaali kartaa sanduuqa boostada ee aad ku shaqeysay adiga oo ah wakiil ahaan. Dhammaan xuduudaha qaabeynta qaabdhismeedka sanduuqyadan waxaa lagu keydinayaa gudaha kombuyuutarkaaga faylka leh kordhinta .ini ee aad ka heshay gudaha galka barnaamijka, wax xog ah lama uruurinayo ama si kale oo dibadda ah looma gudbiyo.
Marka dhammaan xuduudaha la soo galo, waad tijaabin kartaa haddii qaabku sax yahay adigoo riixaya badhanka Adeegga Tijaabada, kaas oo u soo diri doona fariin gaaban oo tijaabo ah qofka wax soo diraya oo u diraya sanduuqa boostada loogu talagalay. Taasi waa taas.
Waayahay, hada waa intaas, baashaal oo ha ilaawin inaad iska qorto kanaalka Telegram haddii aad rabto inaad ku eegto dhammaan wararka daabacaadda soo socota.
Soo Degso Fayl	LSentinel.zip - 4 MB